Qowsaarrada Gumeysi Kalkaalka ah Oo ku Kulmaya Magaalada Baydhabo.
Sunday May 13, 2018 - 10:36:36 in Wararka by Super Admin
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka socda qaban qaabada shir ay isugu imaanayaan hoggaamiyaasha maamullada dabadhilifyada ah ee kajira dalka Soomaaliya.
Shirkan oo ah mid ka dhan ah dowladda Federaalka ee uu madaxda ka yahay Farmaajo waxaa ka qeyb gelaya illaa iyo shan hoggaamiye kuwaas oo lafilayo in ay soo saaraan qodobo ay ku dhaliilayaan hanaanka ay ku socoto xukuumadda Villa Somalia.
Shariif Sakiin oo shalay dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ayaa isku diyaarinaya in uu soo dhoweeyo Gaas iyo Axmed Madoobe halka Xaaf iyo Waare ay kulanka dib ugasoo biirayaan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in hoggaamiyaashu ay kulankooda ku iclaamin doonaan in arrimaha khilaafka dowladaha Khaliijka ay lasafanyihiin Imaaraatka Carabta iyo Sacuudiga ayna diidanyihiin dhax dhaxaadnimada ay qaadatay DF-ka.
Maamul goboleedyada ayaa kasii fogaanayay DF-ka tan iyo wixii ka dambeeyay markii dowladda Federaalka ay magaalada Muqdisho ku qabatay diyaarad sidday lacago malaayiin dollar ah oo u socotay Jawaari madaxii hore ee golaha Baarlamaanka.
Cabdi Wali Gaas, Shariif Sakiin iyo Axmed Madoobe ayaa maalmihii lasoo dhaafay safarro isadaba joog ah ku tagay magaalada Dubai ee wadanka isku tagga Imaaraatka Carabta.
Xoogaga Al Shabaab Oo Weeraray Saldhigyo kuyaal Galbeedka Magaalada Beled Weyne.
Hoggaamiyaasha DF iyo Madaxda Maamul goboleedyada oo gaaray Magaalada Garoowe.